Kwindlu kaGreta, phumla egadini
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGreta
Indlu kaGreta yindlu ezolileyo, eqaqambileyo, nefudumeleyo, ejikelezwe yigadi entle. Kwindawo yakho yokuhlala yabucala ebandakanya
-igumbi eliphindwe kabini elikhulu nelizolileyo,
-igumbi lokuhlambela elinokufikelela kunye nempahla,
-Igumbi lokuhlala elitofotofo elineesofa ezinkulu kunye negumbi lokuhlala nayo yonke into onayo
isidingo sokuphumla kunye nesidlo sakusasa.
SiseTraversetolo, idolophu entle ekufutshane neParma kunye neReggio Emilia.
Indlu ipholile kwaye ikude netrafikhi, ijikelezwe yigadi, ilungele abahambi kunye nabasebenzi. Indawo yabucala, onayo ngokupheleleyo :
-Igumbi lokuphumla elitofotofo elineesofa ezimbini ezitofotofo
-Igumbi lokuhlala lesidlo sakusasa kunye nokuphumla kunye netafile, isofa, isikrini seTV esinesidlali seDVD, imicrowave, umatshini wekofu, ifriji, nayo yonke into oyifunayo kwisidlo sakusasa esilungileyo;
- Igumbi lokuhlambela elikhulu elineshawa, elinesixhobo esomisa iinwele, iitawuli, isepha kunye neshampu, kunye nomatshini wokuhlamba. Ubukho bentsimbi kunye nendawo yokuxhoma iimpahla.
Kumgangatho wokuqala, iyafikeleleka ngezinyuko:
- Igumbi elinamagumbi amabini anebhedi etofotofo ephindwe kabini, amashiti, iwodrophu, idesika nesitulo, iifestile ezinkulu ezimbini ezinenethi zengcongconi, iincwadi ezininzi zokufunda nokuza nazo ekhaya!
-Igadi enkulu, enendawo yokupaka, kunye ne-gazebo yamaxesha okuzola
Ibhedi eyongezelelweyo iyafumaneka, kwi-sofa kwigumbi lokuhlala. Ukufikelela mahala kwi-WiFi.
Le ndlu ikwindawo yokuhlala ezolileyo, kufutshane nelali kunye nomzuzu kude nombindi weTraversetolo, apho uya kufumana iivenkile, iibhari, iindawo zokutyela kunye nemiboniso bhanyabhanya. I-Traversetolo isembindini weNtlambo yoKutya, kwaye unokutyelela iinkampani ezivelisa iimveliso ezahlukeneyo eziqhelekileyo, njengeParmigiano Reggiano kunye neParma ham.
Kufuphi ungandwendwela iinqaba zamaxesha aphakathi kunye neemyuziyam, ujonge iipaki zendalo, uphumle kwii-SPAs okanye undwendwele isixeko esihle saseParma.
Umama wam uLuciana uya kukwamkela kwaye uyafumaneka kwiimfuno zakho.
Mna kunye naye sihlala siqhagamshelwa kwiselfowuni, ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko.
Sithetha isiTaliyane, isiNgesi kunye nesiJamani kunye neSpanish.
Inombolo yomthetho: ZNTRLL60T51G337T